Xaguu ku socdaa dhaqaalaha caalamka ee sii liicaya? - BBC Somali
Xaguu ku socdaa dhaqaalaha caalamka ee sii liicaya?
Waxaa shalay magaalada Davos lagu soo geba-gabeeyay kulanka madasha dhaqaalaha adduunka, halkaasi oo hogaamiyeyaasha caalamka ay uga arrinsanayeen caqabadaha sanadkan wajahaya dhaqaalaha caalamka sida hoos u dhaca suuqyaada saamiyada iyo lacagaha iyo waliba sicirka saliidda.
Arrimaha kale ee ay ka arrinsanayeen waxaa ka mid ah sinnaan la'aanta kla jirta caalamka iyo arrimaha tahriibka.
Kulankani ayaa ku soo beegmay iyadoo maalmihii ugu dambeeyay ay aad hoos ugu dhaceen suuqyada saamiyada caalamka iyo waliba sicirka saliidda oo markii ugu horreysay muddo 13 sano ah gaaray heerkii ugu hooseeyay.
Haddaba suuragal ma tahay in sanadkan caalamku uu ka baaqsado hoos u dhac dhaqaale? Su'aashaasi iyo kuwo kale ayaa waxaannu hor dhignay Cabdiraxman Maxamed Cabdi Xaashi, oo aqoon durugsan u leh arrimaha dhaqaalaha, waxa uu u warramay Suheyba Maxamed Badqas.